Lalàna momba ny fitrandrahana solika : fanomanana ho fandraisana ireo mpampiasa vola | NewsMada
Lalàna momba ny fitrandrahana solika : fanomanana ho fandraisana ireo mpampiasa vola
Efa eo amin’ny dingana fitrandrahana solika izao i Madagasikara. Midika izany fa mila fanavaozana ny lalàna momba ny solika eto amintsika, izay mbola teo amin’ny sehatry ny fikarohana ny misy amin’izao fotoana izao. Noho izay fanavaozana izay, misy ny atrikasa eto Antananarivo omena izay voakasik’izany, mandritra ny 10 andro.
Tsy maintsy ovaina ny lalàna momba ny solika eto Madagasikara, atao mifandraika amin’ny dingana fitrandrahana, efa misy manao ankehitriny. Hita amin’izany ny fitrandrahana solika mavesatra any Tsimiroro ataon’ny Madagascar Oil. Betsaka ny voakasika amin’izany dingana izany, manaraka atrikasa ao amin’ny DLC Anosy, toy ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika, minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola, Omnis. Manohana azy ireo ny Banky afikanina momba ny fampandrosoana (Bad) miaraka amin’ny ALSF*, cabinet avy any ivelany, sy avy amin’ny sehatra tsy miankina mpampiasa vola.
“Ilaina ny fanomanana fandraisana ireo mpampiasa vola hiditra amin’ny sehatra fitrandrahana solika, indrindra ny fifehezana ny lalàna mahakasika izany. Miainga avy amin’io lalàna io ny hamaritana ny fifanarahana amin’ireny mpampiasa vola ireny. Tsy vitsy ny mihevitra ho aty Madagasikara amin’izy ireo, taorian’ny fivorian’ny CBI tany Paris”, hoy ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika, Zafilahy Ying Vah. Ampy traikefa ny Bad, manampy an’i Madagasikara, momba ny harena an-kibon’ny tany.
Nomarihin’ny minisitra ny fahitan’ny Madagascar Oil any Tsimiroro, solika mavesatra, 1,7 miliara barils. Azo ampiasana tsara izany hamokarana herinaratra. Efa nanaovana andrana izany tao amin’ny Jirama, Holcim, Star. Mila fanavaozana ireo milina ao amin’ny Jirama ho amin’izay famokarana herinaratra izay indrindra. Mora kokoa io menaka mavesatra io noho ny gazoala.
Mamaritra ny Banky iraisam-pirenena
Nisy ihany koa ny iraky ny Banky iraisam-pirenena (BM) nihaona tamin’ny minisitra, omaly ihany. Nifampiresahana ny antsipiriany maro momba ny lalàna mahakasika ny harena an-kibon’ny tany rehetra. Mpahay lalàna ireo olona ireo, nizaha izay volavolan-dalàna tokony hitondra tombontsoa. Anisan’ny jerena, ohatra, ny mahakasika ny tontolo iainana sy ny lafiny sosialy. Lalàna hatao hifanaraka eto Madagasikara, indrindra any amin’izay toerana hitrandrahana harena an-kibon’ny tany. “Tokony faritana ho laharam-pahamehana mihitsy izany ho fampandrosoana ny toekarena”, hoy i Rémi Pelon, mpahay lalàna ao amin’ny BM.
ALSF* : African legal support facility.